स्पेनिस ला लिगा : बार्सिलोना र बिल्बाओ भिड्दै – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
स्पेनिस ला लिगा : बार्सिलोना र बिल्बाओ भिड्दै
By Digital Khabar Last updated Aug 16, 201990
स्पेनिस ला लिगाको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार राति हुने लिगको उद्घाटन खेलमा साविक विजेता बार्सिलोना र एथ्लेटिक बिल्बाओ भिड्दैछनन् । बिल्बाओको मैदानमा हुने खेलमा बार्सिलोना फराकिलो जित निकालन्ने अभियानमा छ ।
बिल्बाओ पनि बलियो बार्सिलोनालाई हराएर सुखद सुरुवात गर्ने तयारीमा छ । यस खेलमा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी खेल्ने छैनन् । प्रशिक्षक ईर्नेस्टो भाल्भर्डेले यस खेलमा मेस्सीलाई समावेश गरेका छैनन् । मेस्सी पिडौंलाको चोटका कारण फिजियो थेपारी गरेर बसेका छन् । मेस्सीले अझै एकसाता आराम गर्ने बताईएको छ ।
प्रशिक्षक भाल्भर्डेले मेस्सीलाई खेलाएर बार्सिलोनाले जोखिम नमोल्ने स्पस्ट पारेका छन् । बार्सिलोनामा स्टार खेलाडीको जमघट छ । बार्सिलोनाले यसै सिजन एन्टोइन ग्रीजम्यान, डि जोङ, जुनियर फिर्पो जस्ता खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ । ब्राजिलियन नेइमार भित्र्याउन जोडबल गरिरहेको बार्सिलोनामा पूराना स्टारको पनि कमी छैन ।
यता बिल्बाओ युवा खेलाडीको जोसमा ला लिगामा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने दाउमा छ । उसले यस सिजन एकजना पनि नयाँ खेलाडी किनेको छैन । आफ्नै एकेडेमीबाट उत्पादन भएका युवा खेलाडी बिल्बाओका हतियार हुन् । स्पेनिस ला लिगाको इतिहासमा अहिलेसम्म लेलिगेसनमा नपरेका यी दुई टोलीबीचको भिडन्त रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।#ला लिगा#Football
आज नेवार समुदायले शोक र व्यंग्यको गाईजात्रा पर्व मनाउदैं
अमिताभ बच्चनका परिवारका सदस्यले किन भाग लिन पाउँदैनन् ‘को बन्छ करोडपति’मा ?
सागका सबै समिति विघटन
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युक्यासलमाथि आर्सनलको जित
इङ्ल्यान्डले श्रीलंकाविरुद्धको पहिलो टेस्टमा सात विकेटले जित्याे
बार्सिलोना स्पेनिस सुपरकपको फाइनलमा
उखु किसानहरूलाई अझै ८ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी
‘हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदै – ट्रम्पको…
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:३१
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:२५
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:०९